Philippe Coutinho "Ma hubo mustaqbalka Liverpool" - Ceelhuur.com | Ceelhuur.com
Home » Ciyaaraha » Philippe Coutinho “Ma hubo mustaqbalka Liverpool” Date :December 7, 2017 Author :Hafsa Haji 26 views
Philippe Coutinho “Ma hubo mustaqbalka Liverpool”
Philippe Coutinho ayaa qirtay inuusan hubin waxa ku dhici doona mustaqbalkiisa Liverpool.
Ciyaaryahanka reer Brazil ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Barcelona xagaagaan, waxaana la fahamsan yahay inuu dalbaday codsi uu ka dalbanayo Anfield si uu ugu dhaqaaqo Spain.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa diidday xiisaha, laakiin Coutinho ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku bandhigaya Reds xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay sagaal gool islamarkaana diiwaangashaday todobo caawin 14 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Coutinho ayaa soo xiray kabtanka kabtanimada isagoo dhaliyay seddexleey kulankii ay la ciyaareen Spartak Moscow habeenkii Arbacada, laakiin ciyaartoydaayaa diiday inuu si buuxda ugu biiro kooxda ka dhisan Merseyside ka dib ciyaarta.
“Waxaan joogaa Liverpool, mar walbana sida ugu fiican ayaan u ciyaaraa marka aan fursad u helo inaan ciyaaro, ixtiraamo maaliyada iyo taageerayaasha” ayuu Coutinho u sheegay suxufiyiinta. “Ma aqaano sida mustaqbalka noqon doona, waxa dhici doona bisha Janaayo, waan ogaan doonaa Jannaayo, mana ogi hadii uu jiro dalab.
“Xagaagii la soo dhaafay waxaa jiray shaqo dalbasho si la mid ah sida qof walba oo shaqaale ah, waxaana xiiso u qabay tan iyo markii aan joogey waan la ciyaaray rabitaan iyo rabitaan.
“Xaqiiqdii wax badan ayaa dhacay xagaagan, laakiin rabitaankeygu mar walba waa inaan ciyaaraa oo sameeyo sida ugu fiicneyd meel kasta oo aan ahay – taas bedel ma ahan, waan joogaa (Liverpool), waxaan heysanaa kulamo badan waxaanan isku dayaa inaan sameeyo si ay u caawiyaan. ”
Barcelona ayaa si weyn loola xiriirinayaa inay ku soo laabato dalab weyn oo ay ku dooneyso bisha Janaayo.